अस्पतालको शौचालय नै दुर्गन्धित - Online Majdoor
अस्पतालको शौचालय नै दुर्गन्धित
– विर्षबहादुर रावत, जुम्ला
मेरो घर जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्दछ । २०७७ साल फागुन ९ गते कामको सिलसिलामा म भक्तपुरको कमलविनायकबाट बानेश्वरको लागि गाडीमा बसेँ । गाडीभित्र मेरो पेट बेसरी दुख्यो । सँगै बसेका सिन्धुपाल्चोक घर बताउने एक जना यात्रुले मलाई ग्यास्ट्रिक भएर दुखेको होला भन्नुभयो । मलाई नसक्नु भएपछि म ठिमीको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र नजिक उत्रिहालेँ । पानी एक बोतल किनेँ । पानी खाइसकेपछि मलाई शौचालय जान मन लाग्यो । त्यसपछि म राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्र पसेँ । त्यहाँ उपचार गर्न आउनेको घुइँचो थियो । त्यहाँ भित्र न त हात धुने कुनै साधन थियो न त शौचालयभित्र पानीको कुनै व्यवस्था थियो । शौचालय सबै राम्रोसँग बनाइएको थियो । तर, त्यहाँ भित्र फोहोर थियो । त्यहाँको अवस्था देखेर एक जना कर्मचारीलाई सोधेँ । उहाँले आफ्नो नाम भन्न चाहनुभएन । तर, उहाँले हाकिमलाई बारम्बार भन्दा पनि वास्ता गर्नुहुन्न भन्नुभयो । के यस्तै होला त सरकारी अस्पतालको हालत ? राजधानीमा त यस्तो छ भने अरू ठाउँमा सरकारी अस्पतालको हालत कस्तो होला ? यस्तो हालत देख्दा आफ्नो जागीरमात्र खाने सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई अस्पतालमा परेको समस्या पनि नभन्दो रहेछ भन्ने लाग्यो ।
सङ्क्रमणमा विद्यालय बन्द गर्नु रहर होइन बाध्यता हो
बिस्का जात्रा सहज ढङ्गले सफल होस्